swopnil sansar: 2009
आठसय छोरीकि आमा
नेपाल साप्तहिकमा प्रकाशित यो लेख पत्रिकाकै स्वरुपमा हेर्ने भए यहाँ क्लीक गर्नुहोस्
काठमाडौ आइपुग्नु नै उनका लागी एक प्रकारको संयोग बन्यो । गाउमा आफ्ना दौतरीहरुको बिहे हुँदै थियो । डोली चढेर साथी संगीहरु रुँदैरुँदै पराइ घर जाँदै थिए । तर मुहारमा खुसी बोकेर उनको जीवनको यात्रा भने नया गन्तब्यतिर प्रस्थान हुँदै थियो । अपत्यारिलो ढंगले राजधानी तिर उनका पाइलाहरु मोडिए । आजभन्दा ५४ बर्ष अघि काठमाडौ प्रबेश गर्दाको त्यो क्षण सुनाउदा स्वयं उनलाइ पनि दन्त्य कथा सुनाए झै लाग्छ ।
०१४ सालमा भानु २ सिम्पानी , तनहुँबाट काठमाडौ पाइलो टेक्दा उषा आचार्यको उमेर जम्मा ७ बर्ष थियो । त्यो जमानामा हिडेर काठमाडौं आउनुपथ्र्‍यो । गाडी चल्दैनथ्यो । तनहुँ देखि काठमाडौ पुग्नै ५ दिन लाग्थ्यो । उषालाइ यता आउने अबसर जुटाइदिएका थिए उनकै दाजु मदन शर्माले । पेशाले मदन पत्रकार थिए । राजधानीबाट निस्कने स्वतन्त्र समाचार दैनिकमा उनी काम गर्थे । तनहुँमै बिहे गरेर काठमाडौ आएपछि पत्नि एक्लै हुने भइन् भन्ने चिन्ता पर्‍यो मदनलाइ । फलस्वरुप भाउजु चन्द्रकलाको 'साथी' बनाउन बहिनी उषालाइ डोर्‍याउदै काठमाडौ ल्याए ।
गाउकै स्कुलमा साँवा अक्षर चिन्न थालिसकेकि उषालाइ ढोकाटोलको कान्ति इश्वरी राज्यलक्ष्मी स्कुलमा एकैचोटी कक्षा ५ मा भर्ना गरियो । त्यहि बेला हा,े उनले अंग्रेजीमा ए, बि, सी, डि सिकेको । यहि स्कुलबाटै एसएलसि पास गरिन् उषाले । समकालिन साथीहरु मध्ये सबैभन्दा भाग्यमानिमा पर्छिन् उनी । गाउमा छोरीहरुलाइ पढाउने चलन थिएन । ७, ८, ९ बर्षमै बिहे गर्ने चलन थियो । यस बिपरित उषाको २८ बर्षमा बिहे भयो । "१२ बर्ष त कट्नै हुन्न भन्ने मान्यता थियो ।" त्यो बेलाको परिपाटी बारे उनले भनिन् । अरुले औपचारिक शिक्षा समेत लिन नपाएका बेला उषाले एमफिल सम्मको शिक्षा हासिल गर्न सफल भइन् ।
पद्य्मकन्या क्याम्पस,बागबजार बाट स्नातक तहमा सर्बोत्कृष्ट स्थान हासिल गरेपछि छात्रबृत्ति पाएर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि भारत जाने मौका मिल्यो । दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्स,दिल्ली युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा एमए पास गरिन् । लगत्तै दिल्लीकै प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमै एमफिल समेत उर्त्तिण गर्न सफल भइन् ।
श्रीमान् जयराज आचार्यले फुलब्राइट छात्रबृत्ति पाएर अमेरिका हान्निए । जयराज एक्लै गएनन् । पत्नि उषा र ३ बर्षे छोरालाइ पनि लिएर गए । त्यो बेला उषाको उमेर ३७ बर्ष पुगिसकेको थियो । नेपाल राष्ट्र ब्यांककी जागिरे उषाले १ बर्षे तलबि र ३ बर्षे बेतलबि बिदा लिइन् । मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली हुँदा उषा अमेरिकामै थिइन् । नेपाल राष्ट्र बैंक सँग उनले मागेको बिदा सकिसकेको थियो । कर्मचारीले फोन गरेर फिर्ता बोलाए उनले र्फकन चाहिनन् । उतै बसिन् ।
जसरी हुन्छ बाँच्नु थियो । कमाउने बाटो केही थिएन । छोरा पाल्न र आफु पालिन निकै गाह्रो भयो । काखे बालक च्याप्दै रेष्टुरा र पसलमा शनिबार र आइतबारको दिनमा काम गर्न थालिन् । पछि मौकाले हावर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्च सेन्टर एचआइडी - हावर्ड इन्सिट्च्युट फर इन्टरनेशनल डेभलप्मेन्ट ) मा कार्यक्रम सहायकका रुपमा काम गर्ने अबसर मिल्यो । १६ महिना सम्म त्यसैमा निरन्तर काम गर्दा धेरै बिषयमा जान्ने अबसर जुर्‍यो । रिसर्च सेन्टरमा वर्कसपहरु निरन्तर चलिरहन्थे । त्यस मध्ये एउटा चाही महत्वपुर्ण रह्यो । २९ देशका ४८ सहभागीहरु माझ उनले नेपालका महिला र बालबालिकाहरुको अबस्था बारे एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । भेलामा सहभागी र एचआइडीमा कार्यरत सहकर्मीहरुकै प्रेरणाले हो , उनको दिमागमा नया काम गर्ने सोच पलाएको । गरिबी र अभाबमा पिल्सिएका तिनै नेपाली महिलाहरुको सेवामा लागेको । यदि यसरी नघच्घचाएको भए सायद यो ठाउमा उनी पुग्दैनथिन् होला ।
नेपाल फर्किएर सेभ द चिल्डे्रन युके र वेलर -वुमन्स इकोनोमिक्स एण्ड राइट ) मा काम गर्न थालेकि उषाले आइएलओ का लागी अर्को रिपोर्ट पनि तयार पारिन् । स्वदेसको काँकडभिट्टा देखि भारतको रेड लाइट एरिया सम्म अध्ययनका लागी पुगिन् । नेपाली महिलाहरुको पीडा अझ नजिकबाट नियालिन् । कलकत्ताको रेड लाइट एरीया पुग्दा ९ देखि ४२ बर्षका महिलाहरु यौन ब्यबसायमा लागेको देखिन् । उनीहरुको दयनिय अबस्थाले अझ महिलाकै क्षेत्रमा काम गर्ने दृृढ अठोट गरिन् । आइएनजिओमा ७० हजार भन्दा बढी मासिक आम्दानी हुन्थ्यो । त्यो लोभ लाग्दो जागिर त्यागेर मनै देखि अंगालेको कर्ममा होमिइन् उषा ।
उनले दुइ वटा छोरा मात्र जन्माइन् । जेठा अबिदित अमेरिकाको पि्रन्सटन युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधी गर्दैछन्, कान्छा छोरा अचल राजधानीकै किस्ट कलेजमा एमबिबिएस पढ्दैछन् । आफ्नै कोखबाट उनले छोरी जन्माइनन् तर उनको ममता र स्नेहको छायामा ८६१ छोरीहरु हुर्किए ।
कामको खोजीमा धरानबाट काठमाडौ पसेका थिए बिरेन्द्र शंकर र राधादेबी शंकर । धरानमा ७ कक्षा पढ्दै थिइन् , छोरी दीपा शंकर । उनलाइ पनि यतै ल्याए । तर बुबा आमाले पढाउन सकेनन् । आफ्नै उमेरका साथीहरु स्कुल जान्छन् ,पढ्छन् आफुले घरमै बस्नुपर्दा १३ बषिर्या दीपाको आँखाभरी आँशु थियो । त्यस्तो दर्दनाक स्थितीबारे थाह पाएपछि उषाले नोबेल एकेडिमीमा भर्ना गरिन् । नोबेलबाट एसएलसि र युनाइटेड एकेडिमीबाट प्लस टु उर्त्तिण गरेकी दीपाको पढाइ खर्च पनि उषाले नै ब्योहोरिन् । भाग्य चम्किएर दीपा अहिले फिलिपिन्समा एमबिबिएसको कोर्ष गर्दैछिन् । त्यस्तै गजुरी, धादिङकी निरा पौडेल ....का बुबा आमा उनी सानै छँदा बिते । हजुरआमाले मागेर उनलाइ पाल्थिन् । निकै दिन मागेर गुजारा चल्यो । सधै कति दिन सम्म चल्थ्यो र ? एकदिन भाडा नतिरेको आरोपमा घरबेटीले निकालिदिए । अनि सडकको बास भयो । बृद्ध हजुरआमा र यिं नातिनीको जीवनमा ठुलै बिपत आइलाग्यो । स्कुल पढ्दै गरेकी नीराको भबिष्य बिचल्लीमा पर्‍यो । संकट पर्दा आफ्नो भन्ने पनि को हुन्छ र ? साथ दिने को मानिस भेटिन्छ र ? तर यदाकदा भेटिने रहेछन् । यो दुखद खबर ममतामयी उषाको कानमा परेपछि उनी चुप लागेर बस्न सकिनन् । गजुरीमै गएर उनलाइ भेटिन् । ८ कक्षा पढ्दै गरेकि नीरालाइ पढाउन बस्न र खानको ब्यबस्था समेत मिलाइन् । धादिङकै स्कुलबाट एसएलसि पास गरेपछि काठमाडौंको नोबेल एकेडिमीबाट प्लस टु उर्त्तिण गर्दा समेत उनको सम्पुर्ण पढाइ खर्च उषाले नै ब्योहोरिन् ।
कालोपुलकि निकिता देबकोटा आफ्ना बुबा आमासँग सांकेतिक भाषामा कुरा गर्थिन् । ७ बर्ष अघि महेन्द्र भवन उच्च माबिमा अध्ययनरत निकितालाइ भेट्दा उनमा पढाइ प्रति गहिरो अभिरुचि भेटियो । कमजोर आर्थिक अबस्थाका कारण शारिरीक अपांग -लाटा बहिरा) बनेका बुबा आमा पढाउन नसक्ने स्थिीतिमा पुगे । संयोगले उषासँग निकिताको भेट भयो । र आफ्नो सबै कुरा सुनाइन् । पारिवारीक र आर्थिक अबस्था दयनिय देखेपछि निकितालाइ प्लस टु सम्म पढाइन् । पत्रकारितामा रुचि राख्ने निकिता अहिले नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रको अनलाइनमा काम गर्छिन् । र आफ्नो खर्च जुटाउँछिन् ।
निरा,निकिता र दीपाशंकर कष्टमय परिबेशमा हुर्केका र उषाको न्यानो काखमा लडिबुडी खेल्न पाएका केही प्रतिनिधी भाग्यमानिहरु हुन् । यस्तै माया ,स्नेह सहयोग,अभिभाबकत्व पाउने महिलाहरुको संख्या अहिले सम्म ८६१ पुगिसकेको छ । राजधानी भित्र र बाहिरका गरिब,जेहन्दार,मिहिनेती केटीहरुलाइ प्लस टु सम्म पढाइदिने र बिरामी पर्दा तिनको स्वास्थ्य उपचार गर्ने काम बिगत १० बर्ष देखी उषाले गर्दै आएकि छिन् । काठमाडौको बिशालनगरमा अन्डर पि्रभिलेज्ड गल्र्स एजुकेसन सपोर्ट प्रोग्राम -युजिइएसपी) नामक संस्था खडा गरेकी छिन् । जहाँ उनका ६ जना सहयोगी पनि छन् । संस्थाले पढाएका ३० जना केटीहरुलाइ स्कुल कोर्डिनेटर तोकिएको छ । नया विद्यार्थीहरुलाइ स्कुल भर्ना गर्ने बेला र त्यसपछि उनीहरुको अबस्था बारे स्कुल कोर्डिनेटरहरुले सहयोग गर्छन् ।
पढाउनका लागी छुट्टै कुनै आश्रम गृह भने उनले खोलेकि छैनन् । जो जहाँ छन्, आफ्नै घरमै राखिएका छन् । सम्बन्धित स्कुलमा पैसा तिरिन्छ ,उनीहरुलाइ खान,लगाउन र स्वास्थ्य उपचारका लागी चाहिने सहयोग घरमै उपलब्ध गराइन्छ । बर्षमा ३० वटा भन्दा बढीले सहयोगको याचना गर्दै निबेदन पेश गर्छन् । कार्यालयमा आएका निबेदकहरुको स्कुल ,समुदाय र घरपरिवारको वास्तविक अबस्थाका बारेमा अध्ययन र मुल्याङ्कन गरिन्छ । त्यसपछि छानेर उपयुक्त ठानेपछि मात्र सहयोग उपलब्ध गराइन्छ । उषा ब्यक्तिगत रुपमा यतिका विद्यार्थीहरुलाइ एक्लै सहयोग गर्न भने सक्षम भएकी होइनन् । उनको काममा सहयोग र साथ दिने अनि समर्थन गर्ने ब्यक्ति र संस्थाहरु अमेरिका,सिंगापुर,पmान्स र अन्य मुलुकमा छन् । नेपालमा आफुले पढाइरहेका विद्यार्थीहरुको विवरण इमेल मार्फत सहयोगीेहरुलाइ पठाउँछिन्,इच्छुकहरुले सम्पर्क गर्छन् । उषाको प्राय समय अभाब र समस्या मा पिल्सिएका नेपाली विद्यार्थीहरुलाइ सहयोग जुटाउनमै बित्छ । कम्प्युटरमा औला चलाउँदै सहयोगी खोजिरहेकी हुन्छिन् ।
काभे्र, तनहुँ ,बाँके, कास्की,गोर्खा,चितवन,लमजुङ,सिन्धुपाल्चोक र राजधानी गरि ८०० जनाले केटीहरुले अहिले स्कुल पढिरहेका छन् । प्लस टु पास गरेर कोहि इन्जिनियर,कोेहि नर्स, शिक्षिका बनेका छन् । आफु महिला भएकैले होला उषाले पढाउन पनि महिलाहरुलाइ मात्र पढाइन् । उनको संस्थाबाट सहयोग पाउने जम्मा ८६१ जना सबै महिला मात्र हुन् । किन महिलाहरुलाइ मात्र पढाइन् उनले ? भन्छिन्, "एक वालकलाइ पढाए एक जना मात्र शिक्षित हुन्छ,एक वालिकालाइ पढाए सिंगो परिवार शिक्षित हुन्छ । "
हरेक दिन ४ बजे उठेपछि सुरु हुन्छ , उषाको दिनचर्या । नुवाइधुवाइ गरेपछि विपश्यना गर्छिन् । बिहान उज्यालिदै गएपछि चिया नास्ता बनाउछिन् । श्रीमान् ,छोरा र सानीमा लाइ खाना खुवाएर लाग्छिन् अफिस हिंड्छिन् ।
आफुले गरेको काम समुन्द्रमा एक थोपा पानी मिसाए जत्ति पनि लाग्दैन उषालाइ । केहि पनि नजानि काम सुरु गरियो । अहिले अलिअलि सिके जस्तो लाग्छ । अझै धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा मनमा राखेकी छिन् । सकारात्मक सोचले नै यो मोड सम्म आइपुगेको उनको विश्वास छ । उनको सिद्धान्त छ,"एक्सन् स्पीक्स लाउडर देन् वर्डस् ।" अर्थात्, मुखले बोल्नु भन्दा कामले बढी बोल्छ । त्यसैले बोल्नु भन्दा काम गरी देखाउने ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 4:48 AM
फेरिदैछ रोल्पाको मुहार
द्वन्द्वकालमा युद्धले बनाएका घाउहरु रोल्पामा विस्तारै पुरिँदैछन् । जनयुद्धको उद्गमस्थल रोल्पामा युद्धकालमा आउन कोही मान्दैनथे । द्वन्द्वकालमा रोल्पाको नाम सुन्दा मात्र धेरैको मुटुमा सातो जान्थ्यो । अहिले खुसी हुँदै रोल्पा आउन चाहन्छन् सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी । यतिमात्र होइन, रहरैले यो जिल्ला घुम्न चाहने युवापङ्क्तिको जमात पनि उत्तिकै छ । गएको साता तिहारको पूर्वसन्ध्यामा लिवाङबाट सिमलबाङ जाँदा गाडीमा भेटिए- विवेक ढकाल (२०) । राजधानीको सुविधासम्पन्न एनसिएम कलेजमा पढ्ने उनी विराटनगरका हुन् । तिहारमा उनी घर गएनन् बरु उनी साथीसँग रोल्पातिर हानिए । यहाँको जनजीवन र मानिसहरुको सभ्यता र व्यबहार उनी देखेर उनी छक्क परे । "मैले यस्तो होला भन्ने सोँचेकै थिइन"- उनले भने ।
रोल्पा, जनयुद्धको उद्गम थलो जहाँबाट जनयुद्धको थालनी भयो । यहीँबाट सुरु भएको क्रान्तिको आगो देशभर सल्कियो । मुलुकको संरचना र गरिब निमुखाहरुको दिन फर्काउन भन्दै माओवादीहरुले रोल्पाबाटै जनयुद्धको शङ्खघोष गरे । विस्तारै क्रान्तिले अनेकौ मोडहरु झेल्दै १२ वर्ष पारगर्दा मुलुकमा अनेकौ राजनीतिक उथलपुथल भए । जनयुद्धकै कारण नेपालले विश्वका सर्वशक्तिशाली राष्ट्रको आँखा तान्यो ।
जनयुद्धको उद्गमथलो भएकै कारण पछिल्ला दिनहरुमा रोल्पा धेरै मानिसहरुका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्यो । घुम्नकै लागि यहाँ आउनेहरुको ओइरो लाग्न थाल्यो । रोल्पामा त्यस्तो कुनै गाविस र गाउँ छैन जहाँ जनयुद्धका क्रममा कसैले ज्यान नगुमाएको होस् । त्यस्तो कुनै बस्ती छैन जहाँबाट क्रान्तिमा मानिसहरु सामेल नभएका हुन् ।
निकै विकट, पिछडिएको, अभाव, रोग भोक र शोकले ग्रस्त ठानिएको रोल्पाको अनुहार विस्तारै फेरिदैछ । अहिले हरेक गाविसहरुमा गाडी हिड्ने बाटाहरु छन् । रुकुम र सल्यानलगायत चारैतर्फका जिल्लाहरुबाट सदरमुकाम लिबाङ जोड्ने बाटोहरु बनिसके । वर्षामासबाहेक अरु बेला गाडी चल्छन् । सदरमुकामबाट एक घण्टा टाढाको गाउँ माडिचौरमा पानी ल्याउनका लागि घण्टौको यात्रा गर्नुपथ्र्यो । अहिले घरघरमा पानीका धारा बनेका छन् । गाउँलेहरु तरकारी खेती गर्छन् । कतिपयले च्याउ खेती गर्छन् । माडीबासीहरु टमाटर,काउली लिएर सदरमुकाममा बेच्छन् । द्वन्द्वको समयमा माओवादी अभियानमा गाउँगाउँ दौडिने बिद्यार्थी अहिले निर्धक्कसँग स्कुल जान थालेका छन् । सदरमुकाममा बोर्डिङ खोलिएको छ । यहाँबाट दुइ दिन टाढा रहेको थबाङमा अहिले कम्व्प्युटर इन्स्टिच्युट र बोर्डिङ स्कुलहरु खोलिएका छन् । टेलिफोन टावर बन्दैछ । थबाङ-१ खेरबाङका दिराज बुढामगरले कम्प्यटर पढाउँछन् । करिब ५० जनाभन्दा बढी महिला र पुरुषले अहिले कम्प्युटर सिक्छन् । कम्युटरको आधारभूत तालिमका लागि दुई हजार तीन सय रुपैँया तिर्नुपर्छ । ४५ बषर्ीय बरदप्रसाद घर्ति पेशाले किसान भएपनि कम्प्युटर सिक्न अनिवार्य ठान्छन्। भन्छन्- "के गर्ने ? समयअनुसार परिवर्तन हुनैपर्‍यो ।"
फोटो खिचाउनका लागि पहिले सदरमुकाम आउन बाध्य थबाङबासीहरुलाई अहिले त्यो चिन्ता छैन । दिराज बुढामगरले खोलेको फोटो स्टुडियोमा रोल्पाको उवा, जेलबाङबाट मात्र होइन, रुकुमबाट समेत मानिसहरु आउँछन् । पुरै थबाङ बिजुलीबत्तिको उज्यालोले झलमल्ल छ । छ महिनाअघि मात्रै लघु जलविद्युत आयोजनाले गर्दा गाउँ झलमल्ल भएको हो । "यस्तो दिन आउला भन्ने कहिले लाग्नु, सपनाजस्तो लाग्छ-उहिले र अहिलेको फरक देख्दा"- इरादा झाँक्रीमगरले भनिन् ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 4:18 AM
नेपाल धेरै विदेशी पर्यटक आउने मुुलुकमा पर्छ ।
पर्यटक भनेका साइबेरयिा वा तिब्बतबाट आउने शैलानी चराका
स्तै हुन्, जो
को दृश्यावलोकन गरेर एउटा निश्चित अवधिपछि फर्किन्छन्
कोरयिाको राजधानी सोलका पिटर
किम, ५४, भने अर्कै प्रजातिको चरा परेछन् । उनले
त नेपाल बस्नलाई नाम नै प्रकाश गुरुङ राखिसके ।
पहिलोपटक ०५० सालमा नेपाल आएका यी चिकित्सकलाई यो हिमाली देश यति मन पर्‍यो कि कसैले नेपाली भन्यो भने आनन्दले विभोर हुन्छन् । कहिलेकाहीँको आउजाउबाहेक १६ वर्षदेखि लगातार नेपाल बसेका पिटर किमले सेवालाई धर्म बनाएका छन् । यसबीचमा उनले काठमाडौँदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका विभिन्न अपांग अस्पतालहरूमा पढाएका छन्, निःशुल्क । हरेक वर्ष १५ नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति जुटाइरहेका छन् । नेपालका अपांग विद्यार्थीका लागि केही गर्न उनले स्वदेशी साथी काङलाई पनि मनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा विभाग नै खोल्न सघाएका छन् ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 4:00 AM
रिक्सा छाडी टाँगातिर
"तपाईं अर्कोमा आउनूस्, यो अब प्याक भयो ।" यात्रुले टाँगा भरएिपछि उनले आफ्नो घोडालाई चितवनको रत्ननगरबाट सौराहतिर कुदाए ।
रत्ननगर दक्षिणको यो कच्ची सडकमा निकै कम गा
डी चल्छन् । त्यस कारण, टाँगावाल
हरूको व्यवसाय राम्ररी चलेको छ ।
तिनैमध्येका एक हुन्, चितवन ब
छ्यौली-३, मालपुरका वीरधन माझी, ४० । उनले १८ वर्ष अर्काको ट्याक्टर चलाए । तर, रातदिन नभनी काममा खट्दा पनि महिनावारी कमाइ भने तीन हजार रुपियाँभन्दा कहिल्यै माथि उक्लिएन । पाँच जनाको परविार पाल्न सधैँ धौधौ । रातदिन परविार पाल्ने चिन्ता । कहिलेकाहीँ त घरझगडा नै पर्ने । त्यसपछि उनले माछा मार्ने पेसा पनि अँगाले । मालपुरमा दिनभर माछा मार्दा दिनको पाँच सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म हुन्थ्यो । त्यहीबीचमा स्थानीय
प्रशासनले माछा मार्न पनि लाइसेन्स चाहिने नियम लागू गर्‍यो । बिनालाइसेन्स माछा मार्दा प्रहरीले समातेर थुनिदिन्थ्यो । त्यही दुःखमा वीरधनको दिमागमा टाँगा व्यवसाय गर्ने नयाँ सोच पलायो ।
नभन्दै ट्याक्टर त्यागेर टाँगा तानेको ठ्याक्कै दुई वर्षमा वीरधनसँग ७० हजारका घोडा र ३५ हजार रुपियाँको टाँगा छ । मासिक १४ हजारभन्दा माथिको कमाइले उनको जीवनशैलीमा ठूलो परविर्तन ल्याइदिएको छ । दुई छोरी पूजा र सुजाताले राम्रो शिक्षा पाइरहेका छन् । छोरा विष्णु आउने चैतको एसएलसी परीक्षाका लागि निस्िफक्री पढिरहेका छन् । अभावको यात्रा छिचोलेर आएको माझी परविार अहिले सुखी र खुसी छ ।
काम गर्ने दह्रो पाखुरी लिएर सहज जीवन खोज्दै १४ वर्षअघि बाराको करैयाबाट चितवन आएका सन्तुराम चौधरी, ३८, को कथा पनि वीरधनको जस्तै छ । उता घरमा छँदा किसानी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने उनले चितवनमा पाँच वर्ष रक्िसा चलाउँदा राम्ररी परविार पाल्न सकेनन् । भन्छन्, "बिहान
झिसमिसेदेखि नै मरेर लाग्दा पनि महिनामा बढीभन्दा बढी छ हजार कमाउँथेँ ।" तर, अहिले सन्तुरामको पनि कथा फेरएिको छ । उनले सरकारी स्कुलमा पढ्ने तीनै जना छोरालाई निजी विद्यालयमा सारेका छन् । उनको यो सफलताका पछाडि पनि टाँगा व्यवसायकै देन छ ।
जनकौली-७, चितवनका इन्द्रबहादुर रानामगर, ४८, ले पनि सुरुमा सन्तुरामकै नियति भोगेका थिए । करबि १० वर्ष रातदिन रक्िसा चलाउँ
दा उनले पनि महिनाको छ हजारभन्दा बढी हात पार्न सकेनन् । त्यति पैसाले सात जनाको परविारको राम्रो जो
हो हुने कुरै थिएन । अझ छोराछोरी पढाउन त कहाँ हो कहाँ थियो । तर, गत वर्ष
टाँगामा हात हालेपछि भने उनको मासिक कमाइ १२ हजार रुपियाँभन्दा बढी भएको छ । भन्छन्, "यस काममा पहिलेजस्तो दुःख छैन ।"
चितवनको रत्ननगरदेखि सौराहसम्मको पर्यटकीय क्षेत्रमा अहिले टाँगा लोकपि्रय सवारीसाधन भएको छ । हरेक टाँगाले ३० रुपियाँमा रत्ननगर-सौराह गराउँछन् । सौराहभित्रै पनि २० रुपियाँमा टाँगा
मा सयर गर्न सकिन्छ । यस व्यवसायमा लामो समयसम्म रक्िसा र ट्याक्टर चलाएका ३४ जना संलग्न छन् । हिजो मुस्िकलले घरखर्च धान्ने उनीहरू अहिले अरूलाई ऋण दिन थालेका छन् । सरकारी स्कुलमा पढ्ने आफ्ना छोराछोरीलाई धमाधम निजी बोर्डिङ् स्कुलहरूमा साररिहेका छन् । टाँगा व्यवसाय गर्न थालेपछि कुनै समयमा ट्याक्टरदेखि रक्िसा चलाउने यी मजदुरहरूको जीवनस्तर अपत्यारलिो ढंगले उकासिएको छ ।
तिनैमध्येका एक दोरंगी-५, चितवनका माधव खनाल, ३८, ले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारीबाट निजी विद्यालयमा सारेका छन् । ६५ हजार रुपियाँ ऋण लिएर
यस व्यवसायमा आएका उनी भन्छन्, "पाँच वर्ष निथु्रक्क पसिनाले भिजेर रक्िसा पेलेँ केही भएन, टाँगाले गर्दा छोराछोरी पढाउन सक्ने भएको छु ।" कति व्यवसायीहरू ७० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म ऋण लिएर यो
पेसामा आएका छन् भने कतिले साहू
को टाँगा चलाइरहेका छन् । चितवनको यस भेगमा धेरै खट्नु नपर्ने र आम्दानी राम्रो हुने भएकाले यस पे
सामा अझ धेरै मानिस आउन लागेको अखिल नेपाल टाँगा मजदुर संघका सचिव कृष्णकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । भ
न्छन्, "तर, टाँगा व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै छन् ।"
उनका अनुसार टाँगालाई पार्किङ् गर्ने ठाउँ नै छैन ।
रत्ननगर र सौराहमा समेत सडकमै टाँगाहरू राख्नुपर्ने बाध्यता छ । जथाभावी राख्दा नगरपालिकाले दिनहुँ हैरान खेलाउँछ । टोल समितिबाट पनि उस्तै चर्को दबाब खेप्न बाध्य छन् उनीहरू । स्थानीयहरू घोडाको दिसापिसाबले दुर्गन्ध बढाएकाले हटाउने माग गररिहेका छन् । एक जना व्यवसायी राजमणि माझीका अनुसार, टाँगाका लागि पार्किङ्भन्दा पनि ठूलो समस्या बनेका छन् चितवनका गाडी मालिकहरू । भन्छन्, "यहाँका गाडी साहूहरू टाँगा नचलाउ भन्दै दिनहुँजसो धम्की दिन्छन्, हामी कसरी बाँच्ने ?"
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 3:49 AM
महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गर्ने, सामाजिक र राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी बनाउने, नेतृत्व र सीप विकास गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने सोच थियो तर वातावरण थिएन । तैपनि साहस जुटाइन्, घोराही-३, दाङकी विमला योगी, ३८, ले । पानी, पँधेरा र पीपल चौतारी महिलाहरू भेला गर्दै उनले अभियान थालिन् ।
१० जना महिलालाई लिएर समूह गठन गर्दाको त्यसबेला उनीहरूले जम्मा पाँच रुपियाँ उठाएका थिए । पाँच रुपियाँबाट सुरु भएको त्यस कामले अहिले तीन करोडभन्दा धेरै पैसा जम्मा गरिसकेको छ । सात जना सहकर्मीको सहयोगबाट सुरु भएको यो अभियान महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने दाङको सबैभन्दा सक्रिय र ठूलो संस्थाका रूपमा स्थापित छ । प्रारम्भको त्यो साँघुरो परिधि नाघ्दै अहिले चेलीबेटी बेचबिखन, शान्ति, मानव अधिकारका क्षेत्रमा पनि काम गर्छ ।
दाङको पहिलो महिला संस्था नै विमलाले पहल गरेको नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र हो । संस्था दर्ता गर्न खोज्दा धेरै कठिनाइ झेल्नुपरेको उनी स्मरण गर्छिन् । भन्छिन्, "१६ वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङमा दर्ता गर्न खोज्दा तत्कालीन सीडीओले निकै हप्काए । महिलाले पनि संस्था खोल्छन् भन्दै धम्क्याउँदै पठाए ।" हिम्मत नहारिकन लागिपरेकी उनले तीन महिनापछि विधिवत् रूपमा संस्था दर्ता भयो । समूहमा दिदी-बहिनीहरूलाई एकताबद्ध गर्न घरमा जाँदा पुरुषहरूले कुकुर पठाएर टोक्न लगाउने कटु अनुभवसमेत उनीसँग छ । "महिलाहरूका पक्षमा लड्न ठूलै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । तर, हिम्मत नहारीकन लडिरहेँ," विमला भन्छिन् । यसबापत उनले जिल्ला विकास समिति, दाङबाट २०५५ उत्कृष्ट समाजसेवी र रेयुकाई जिल्ला शाखाबाट ०५६ मा महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत वर्षको समाजसेवी पुरस्कार पाइसकेकी छन् । हालै मात्रमा विधवा महिला सरोकार केन्द्रले पनि उनको सम्मान गरको छ ।
दाङका ४० वटा गाविस र दुईवटा नगरपालिकामा महिलाहरूलाई सीपमूलक, नेतृत्वदायी र आत्मनिर्भरका तालिमको अगुवाइ गरिरहेकी विमला भन्छिन्, "यस सामाजिक अभियानमा निरन्तर लागिरहने छु ।"
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 3:16 AM
दसै आएन दाङमा
नरेन्द्र रौले / दाङ
"बुबा, म भोली साँझ आइपुग्छु । साथीहरु सँग काठ ल्याउन जंगलतिर जानु छ । " बिहान परिवार सँग यसो भनेर बिदा भएका गोल्टाकुरी ८ कौवाघारी दाङका सोमराज नेपाली कहिल्यै घर फर्केर आएनन् । छोराको पर्खाइमा बसेका थिए उनका बुबा देब बहादुर । उनी त्यति बेला निरास बने जब आफ्नै कानले स्थानिय रेडियोबाट छोराको मृत्युको खबर सुन्नु पर्‍यो ।
गोल्टाकुरीकै शुसिला नेपाली २२, आफ्नो बुबा निब बहादुर लाइ पर्खेर बसिन् । चाँडै फर्केर आउने आशा दिएका थिए उनका बुबाले । त्यसै दिन दिउसो गाउलेहरुको मुखबाट जब उनले बुबा बितेको खबर पाइन्, अनि भक्कानिएर रोइन् ।
घटना ०५९ साउन १६ गतेको हो । दाङको पश्चिमी क्षेत्र गोल्टाकुरीका तेह्र जना पुरुषहरु काठ ल्याउन जंगल तर्फ गएका थिए । उतै बास बस्ने सोचले सातु सामल पनि बोकेर लगेका थिए । हिडेको केहि घण्टामै उनीहरु नेटा भन्ने ठाउमा सेनाद्वारा पक्राउ परे । राजाकोटको टेलिफोन टावर नजिकै लगेर उनीहरुलाइ सामान्य सोधपुछ गरियो । अनि जे सोचिएन त्यहि घटना भयो । प्रत्येकलाइ आफ्नो कमिज खोल्न लगाइ ,आँखामा पट्टि बाँध्न लगाइयो । लहरै राखिएका तेह्र जनाहरुलाइ सेनाहरुले अन्धाधुन्ध फायर गरे । एक जना जना छबिराम सार्कीले दौडेर ज्यान जोगाउन सफल भए । बाँकी अरुको घटना स्थलमै ज्यान गयो ।
गोल्टाकुरी गाबिसको बंगालपुर गाउ पुग्दा सबैका निधारमा टिका लगाएको देखिन्थ्यो । आगनमा बालबालिकाहरु उन्मुक्त हाँसो हाँसिरहेका थिए । तर यहाँबाट ५ मिनेट मात्र टाढाको दुरीमा रहेको कौवाघारी पुग्दा खासै चहपहल देखिएन । तिहारले दैलोमा पाइला टेकिसक्यो तर त्यसको रौनकता नै छाएन । "तिहार आए जस्तो नै लागेन । मैले रोपेका फुलहरु पनि फुलेनन् ।" निकै भाबुक मुद्रामा देखिएकि सुसिलाले दुखेसो पोखिन् । आर्थिक अभाबकै कारण कक्षा ६ मै पढाइ छोड्न बाध्य भइन् उनी । उनी पछि जन्मिएका भाइ दिनेश १६,र बहिनी बबिता १८ लाइ पढाउन आमा साबित्रा कुबेतमा दुख गर्न बिबस भइन् ।
मृतक रेशम नेपालीका ३ वटा छोराछोरी अहिले सबैभन्दा बिचल्लीमा परेका छन् । ०५९ मा घटना हुँदा दुइ छोरी लुमा , मीना र छोरा अनिल सानै थिए । छोराछोरी कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले राधालाइ सताउन थाल्यो । एकातिर पति बियोगको पीडा अर्कोतिर बालबच्चा हुर्काउने पीर राधाले सहन सकिनन् । अन्तत आत्महत्या गरिन् । जसोतसो बृद्ध हजुरबुबा भीम बहादर ले हुर्काए उनीहरुलाइ । लुमा र मीना कक्षा ४ मा पढ्दैछिन् ,अनिल १ मा पढ्दैछन् । अब थप कसरी पढाउने त्यो चिन्ता पनि थपिएको छ उनै हजुरबुबा माथी ।
गएको बैशाखमा मृतक रमेश नेपाली कि श्रीमति लक्ष्मी बाहेक बाँकी ११ जनाका परिवारले राहतस्वरुप रु १ लाख पाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रमेशको नाममा क्षतिपुर्ति रकम आएपनि लक्ष्मीलाइ उक्त रकम दिइएन । र फिर्ता भयो । कारण थियो एउटै घटनामा रमेश नाम गरेका दुइ जना पर्नु । "जिप्रका मा धाउनु धाइयो ,पैसा हात लागेन । अरु संस्थाले पनि पहल गरे तर केहि सीप चलेन ।" लक्ष्मीले भनिन् ।
"बजार तिर कस्तो रमाइलो छ । हाम्रो गाउमा त तिहार पनि आएन ।" देब बहादुर नेपाली, ५४ ले नमिठो मान्दै भने । देशमा शान्ति छाए पनि खासै गोल्टाकुरीमा त्यसको अनुभुति पाइदैन । अझै द्वन्द्वका आला घाउहरु मेटिएका छैनन् । त्रास बाँकी नै छ । सरकारले केही गरिदिन्छ कि भन्ने आश गाउलेहरुमा हराइसक्यो । उनीहरुको सामुहिक स्वरमा भन्छन्, शान्ति आएर पनि के गर्नु ? मर्ने र मारिने त जहिले पनि सर्बसाधारण नै हुन् । नेताहरु जहिले पनि कुर्सीका भोका छन् ।
बिभिन्न संस्थाहरुको पहलमा सिलाइ कटाइ तालिम सिकेका महिलाहरु घरमै ब्यबसाय गरेर सामान्य खर्च चलाउछन् । गाउकै स्कुलमा पढिरहेका डेढ दर्जन भन्दा बढी द्वन्द्व पिडीत बालबालिकाहरुले कापी, किताब र झोला बाहेक संघ संस्थाहरुबाट खासै सहयोग पाएका छैनन । "कापी,कलम र डे्रसको समस्या छ । महिनाको ५० रुपैया फिस तिर्न पनि कसलाइ भन्ने ?" बगुमाएकि प्रभा नेपाली, १३ ले भनिन् ।
गोल्टाकुरी घटनाको ठ्याक्कै १ बर्ष अगाडी -०५८ मंसिर १३) घोराहि नगरपालिका ३ बर्गदि, दाङमा पनि त्यस्तै घटना भयो । बर्गदिमा धान चुटिरहेका ११ जना थारु समुदायका ब्यक्तिहरु लाइ लाइन लगाएर सेनाले गोली हाने । घटनास्थलबाट १० मिनेट पर कटहिमा खेतमा काम गरिरहेकि थिइन् ,भौनि चौधरी ,३५ । श्रीमान् खुसिराम चौधरी पनि धान काट्न गएका थिए । बच्चाहरु रुदै,चिच्याउदै आइपुग्दा उनी चकित भइन् । किन बुबालाइ धान काट्न पठाएको भन्दै छोरी मीना उपिmन थालिन् । खेतबाट घटनास्थल बर्गदी नपुग्दै उनी बाटोमै बेहोश भइन् । त्यसपछि के भयो उनलाइ नै थाह नै छैन ।
०५८ मंसिर १३ गतेे कटहिमा निर्दोष ८ जनालाइ मारेपछि सेनाहरु घोराहि तर्फ फर्किए । रक्ताम्य भएर बाटोमा लडेका लाशलाइ काखमा लिदै आफन्तहरु बिलौना गर्न थाले । शरीरका गोली झिक्न थाले । गाउलेले लाश लिएर घर र्फकदै गर्दा फेरी सेनाहरु गाउ पसे । र गाडीमा राखेर मृतकहरुलाइ महेन्द्र अस्पताल घोराहिमा ५ दिन सम्म थन्क्याइयो । किरा परेर हातले समात्नै नसक्ने भएपछि बल्ल आफन्तको जिम्मा लाइयो ।
घटना पछि कटहिमा यति त्रास छायो कि घरमा ताला लगाएर सबै गाउलेहरु १२ दिन सम्म अन्तै भागे । अर्काको जग्गामा काम गरेर खाने यो सुकुम्बासी बस्ति फेरी चिन्तामा परेको छ । साहुहरुले प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्रि गर्न थालिसके । "हामीले के खाने,के लाउने ? छोराछोरी पढाउनै धौ धौ भइसक्यो । " भौनि भन्छिन् । उनका एक छोरा बिनोद,१४ कक्ष्ाा ८ र मीना कक्षा १० पढिरहेका छन् । एसएलसि पछि उनीहरुको पढाइलाइ कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ताले रातदिन सताउन थालेको छ ।
कलिलै उमेरमा श्रीमान् गुमाएपछि यहाँका अधिकांस महिलाहरुले सानै उमेरका छोराछोरी छोडेर अर्को बिहे गरे । जसका कारण बालबच्चाहरु बेसहारा बने । श्रीमान् गुमाएकि सुमित्रा चौधरीले घटना भएको २ दुइ महिनामै देउखुरीको केटासँग अर्को बिहे गरिन् । त्यतिबेला उनकि छोरी फुलपाति को उमेर जम्मा १ बर्ष मात्र पुगेको थियो । यता कटहिमा उनको दुइ तले सुनसान घर भत्कनै लाग्यो । भएजतिको जग्ग्ाा देवरहरुले खाइसके तर उनी फर्किनन् । ५ बर्षकि छोरी र २ महिनाको छोरा घरमै छोडेर सौडियार,दाङकै केटासँग पोइल गएकि सीतालाइ आफ्ना सन्तानको माया लागेन ।
गोल्टाकुरीमा झै कटहिमा पनि सयपत्रि र हजारी फुलहरु फुलेनन् । सबैका अनुहार मलिन थिए, निराशाको कालो छाया मडारिरहेको थियो । भबिष्य अन्योल थियो । खान,लाउन,छोराछोरी पढाउने दुखको भारी नेपाल सँग बिसाए । "आफ्नो जग्गा पनि छैन । अर्काको खेतीमा काम गरेर कति खाने ? कसरी बाँच्ने ?" श्रीमान् गुमाएकि फुलमानी चौधरी ४८, ले भनिन् ।
दसै र तिहारमा आफ्ना गुमेका आफन्तहरुलाइ निकै सम्भिmए ,कटहीबासीले । बुबाको निधन हुँदा ८ बर्षकी मीनाले धमिलो सम्झना सुनाउदै भनिन्, "बुबा भएको कति रमाइलो हुन्थ्यो । पढ्न पनि मलाइ समस्या हुदैनथ्यो ।"
धेरै मीनाहरु सहयोगको आशामा पर्खिरहेका छन् ,यहाँ । फर्किदा भौनी चौधरीको एउटा वाक्यले निकै घोचिरह्यो । "लेखेर मात्र हुँदैन सर , छोराछोरीलाइ पढाइदिने ब्यबस्था मिलाइदिनुपर्‍यो ।" के गोल्टाकुरी र कटहिबासीको घाउमा कसैले मल्हम लगाइदेला ?
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 4:37 AM
पाँचबर्ष अघि जमल स्थित एरिना मल्टिमिडिया इन्सिट्च्युटमा उनीहरुको भेट भयो । लक्ष्य एउटै थियो ,डकुमेन्टी्र र फिल्म सम्पादन तथा निर्देशनबारे पोख्त बन्ने । छ महिना लामो अबधिमा एक अर्कालाइ नजिक बाट चिन्ने सँयोग जुर्‍यो । मन मि ल्यो ,गन्तब्य एउटै भयो । तय भयो जीवनको लामो यात्रा ।पोखरामा जन्मेकि इशु लामा २५, र बालाजु ,म्हेपिमा जन्मेकि सन्तोषि नेपाल २४ सानै देखि चलचित्रमा चाख लिन्थे । पहिलो पल्ट 'चिनो' र 'रोमन होलिडे ' चलचित्र हेर्दा सन्तोषिको उमेर दस बर्ष मात्र थियो । बिना आवाज चार्ली च्यापलिनको कमेडि हेर्दा इशु पनि दस बर्षमा पाइलो टेक्दै थिइन् । त्यहि बेला देखि हो मिडिया,चलचित्र लाइन तिर उनीहरुको ध्यान मोडिएको । जाँगरिला यि्र युबतिहरुले बनाएको एक्ट लोकल्ली थिंक ग्लोबल्ली नामक तीन मिनेटको डकुमेन्टि्रले युके नेपाल क्लाइमेट चेन्ज कम्पिटिसनमा यो साता १२४ प्रतिष्पर्धी लाइ उछिन्दै पहिलो स्थान हासिल गर्‍यो । रु ६० हजार पुरस्कार स्वरुप उनीहरुले पाए । स्की्रप्ट लेखन,सम्पादन उनीहरुले नै गरेका हुन् । आवाज सन्तोषि नेपालको छ । प्रतियोगीता बि्रटिस राजदुताबास र बि्रटिस काउन्सिल र डिफिड ले आयोजना गरेको थियो । हर्मन माइनर बोर्डिङ स्कुल पोखराबाट एसएलसि उर्त्तिण गरेपछि आफ्नो भविष्य खोज्दै इशु काठमाडौ आइ पुगिन् । कमर्स विषय लिएर पद्य्म कन्या क्याम्पसबाट प्रबिणता तह उर्त्तिण पनि पुरा भयो । अहिले ओस्कार कलेजमा चलचित्र निमार्ण तथा निर्देशनमा स्नातक तह पहिलो बर्षमा अध्ययनरत छिन् । क्षेत्रपाटीको सरस्वति बोर्डिङ स्कुलबाट एसएलसि उत्तिर्ण गरे लगत्तै नेपाल टेलिभिजनको लोकपि्रय साङ्गितिक कार्यक्रम 'द कलेक्सन ' मा सन्तोषिले सम्पादन गर्न थालिसकेकि थिइन् । पब्लिक युथ क्याम्पसबाट कर्मसमा स्नातक र पद्य्म कन्याबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकि सन्तोषिले सम्पादन गरेका डकुमेन्टि्रको संख्या अहिले २५ र म्युजिक भिडियोको संख्या आधा दर्जन नाघिसक्यो । इशाले तीन वटा टेलिभिजन कार्यक्रमको लोगो एनिमेशन र आकाश अधिकारीद्वारा को 'काठमाडौ ' चलचित्र समेत निमार्ण गरिसकिन ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 10:08 PM
"ए ,तिमीहरु एकै दिनमा जन्मेको हो ?" बाटोमा हिडिरहदा धेरैले उनीहरुलाइ यहि प्रश्न सोध्छन् । "एकै दिनमा त हो नि ।" दुबैले एकसाथ जवाफ फर्काउछन् । अझैपनि मानिसहरु प्रश्न सोध्न छोड्दैनन् । को अग्लो छ ? को होचो छ ? साँच्चै एकैदिनमा जन्मेको हो ? सुनेर दुबै जना खित्का छोडी हाँ सिदिन्छन् ।
कुमारीपाटि ललितपुर घर भएकि केशु खड्का र काश् खड्का दिदी बहिनी हुन् । तर ब्यबहारमा साथी जस्तै छन् । जहाँ जादा पनि सँगै जान्छन् । सगै हिड्छन् । केशुको उमेर अहिले १५ बर्ष पुग्यो । काशु पनि पन्ध्र बर्ष पुगिन् । यिं दुइ दिदी बहिनी जुम्ल्याहा हुन् । दस मिनेटको फरकमा उनीहरुको जन्म भयो । हेर्दाखेरी दुबैको अनुहार मिल्दोजुल्दो छ । उचाइ पनि लगभग बराबर नै छ ।
लगनखेलको क्याम्पियन एकेडिमीमा कक्षा दस मा पढ्दैछिन उनीहरु ।स्कुलमा हुने गतिबिधीहरु वक्तृत्वकला र वादविवाद प्रतियोगितामा भाग लिन कहिल्यै छुटाउदैनन् उनीहरु । काशु बास्केटबलमा सफलता हात पार्छिन् ,भने केशु वादविवाद प्रतियोगितामा । कक्षा ७ पढ्दा लिटल मिष क्याम्पियन प्रतियोगिता भएको थियो । जम्मा ३७ जना प्रतियोगी मध्ये केशुले त्यसमा फस्ट रनर अप र काशुले सेकेन्ड रनर अपको उपाधि हात पारिन् ।
लगाउन र खानमा पनि दुबैको रुचि मिल्छ । कासु बिभिन्न परिकार बनाउन सिपालु छिन् । केशुलाइ खासै खाना पकाउनमा रुचि छैन । अमिलो र पीरो भनेपछि उनीहरु हुरुक्कै हुन्छिन् । साँझतिर चोकतिर आएर चट्पटे नखाएको त दिनै छैन । चट्पटे यति स्वादिलो लाग्छ कि खाँदा खाँदा ५ प्लेट पुगेको पनि थाहै पाउँदिनन् । कान्तिपुर र द हिमालयन टाइम्स उनीहरुले नियमित रुपमा पढ्ने पत्रिका हुन् । अंग्रेजी भाषामा पाइने उपन्यास,कथा,म्यागेजिन पनि खोजि खोजि पढ्न मन पर्छ । अँ, उनीहरु लाइ घुम्न पनि मन पर्छ । बुबा आमा सँग पोखरा र मनकामना जस्ता ठाउहरु पनि घुमेका छन् उनीहरुले । आमा सुनिताले भने अनुसार, "कासु छिटो रिसाउछिन् । केसु बुझ्ने खालकि छिन् । " भविष्यमा कासु डक्टर बन्ने सोचमा छिन् । केशु लाइ कहिले इन्जिनयर बनौ जस्तो लाग्छ कहिले डक्टर । दोधारमा छिन् ।
कुमारीपाटि डाँफे इंगलिस स्कुल , ललितपुरका सौरभ बस्नेत र गौरव बस्नेत पनि जुम्ल्याहा दाजुभाइ हुन् । उनीहरुको घर कुमारीपाटि हो । ललितपुरमा बुबाको कपडा पसल छ । गौरब जेठा हुन् ,सौरभ कान्छा । उमेरले चौध बर्ष पुगे । दुबै जना डाफे स्कुलमा कक्षा ८ मा पढ्दैछन् ।
कक्षा ७ को अन्तिम परिक्षामा गौरब पहिलो भए । सौरभ पाचौ स्थानमा पास भए । बास्केटबल,टेबलटेनिस,चेस,फुटबल,क्यारिमबोर्ड,कम्प्युटरगेम,ब्याडमिन्टन, स्वीमिङ उनीहरुले निकै मन पराउने खेलहरु हुन् । यसमध्ये गौरबले बढि खेल्ने खेल चाहि ब्याडमिन्टन हो । स्कुलमा हुन ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा गौरब सधै पहिलो हुन्छन् । सौरभले बढि जसो बास्केटबल खेल्न मन पराउछन् । उनले पनि सधै केहि न केहि पुरस्कार हात पारेकै हुन्छन् । कागजका घर बनाउने, कार्टुन बनाउने, चित्र बनाउनमा पनि उनीहरुको सोख हो ।
सौरभलाइ माछा ,मासु भनेपछि अघाउजि खान मन लाग्छ । जति खाए पनि धितै मर्दैन । गौरब त गुलिया परिकार खान मन पराउदा रहेछन् । सौरभले जिबजन्तु पाल्न मन लाग्छ । आफ्नो आमा सँग बजार गएर रु आठ सयमा किनेर ल्याएको एक्युरेममा गोलफिस,स्वीपर,थाइगोफी र सार्क गरी बिभिन्न जातमा माछा पालेका छन्, गौरबले । बुबा कृष्ण बस्नेत आफ्नो छोराको मुल्याङ्कन गर्छन् । उनी शान्त र गम्भिर स्वाभाबका छन् । धेरै बौल्दैनन् । सौरभ त चञ्चले छन् । ज्यादा घुमफिर गर्छन् । लुगा चाहि फरक फरक रंगका लगाउछन् यि दाजुभाइ । सर्ट ,जिन्स पाइन्ट र सुट लगाउदा आफुलाइ सुहाएको झै लाग्छ उनीहरुलाइ । भविष्यमा के बन्ने रहर छ त ? सौरभ भन्छन् , " म इलेक्टो्रनिक इन्जिनियर बन्छु । " उता गौरब भन्छन्, " म डाक्टर बन्छु । "
सुस्मिता धवलकोटि र सुजाता धवलकोटीको घर लमजुङ जिल्लाको बेशिशहरमा पर्छ । बुबा आमा काठमाडौ आएको अठार बर्ष पुगिसक्यो । काठमाडौमै जन्मेका सुस्मिता र सुजाता पनि जुम्ल्याहा दिदी बहिनी हुन् । उमेरले उनीहरु दस बर्षका लागे ।
नयाबानेश्वरको अरुणदिप एकेडिमीमा कक्षा ४ मा पढ्दैछन् । दुबै बहिनिलाइ कविता लेख्न, पेन्टिङ गर्न र नाँच्न मन लाग्छ । स्कुलमा कार्यक्रम हुदा भाग लिन छुटाउदैनन् । अनि कस्तो संयोग ∕ भविष्यमा दुबैको एउटै पेशा बनाउने सोच छ । 'पढेर के बन्ने ? ' दुबैले एकसाथ भने, "डक्टर बन्ने । " बानेश्वरमा पसल चलाएर बसेकि आमा शान्ति पनि दुबै छोरी डक्टर बनुन् भन्ने चाहन्छिन् । "मेरा छोरीहरु राम्रो डक्टर बनुन् । नेपालमा बसेर नेपाली दाजुभाइकै सेवा गरुन् । " आमा शान्तिले भनिन् ।
घरमा सुजाता अलि बढि बोल्छिन् रे । सुस्मिता कमै बोल्छिन् । लगाउनमा एउटै रंग मन पर्छ । कहिले काहि उनीहरु बिच ब्याडमिन्टन खेल्दा, लेख्न, पढ्ने बेला झगडा पनि हुन्छ । तर तुरुन्तै झगडा मिलिहाल्छ । सबैले सबैले सुजाता र सुस्मिता जसरी मिलेर बस्न सके कस्तो जाती हुन्थ्यो हगि .
"किन हतारएिको ? तिमी मात्र घर जाने हो र ?" घडीमा रातको १० बजिसक्यो । प्रा डीपी भण्डारी घर जान हतारएिका छन् । तर, गीतकार रत्नशमशेर थापा आफूलाई मनपर्ने हिन्दी गीतहरू फर्माइस गररिहेका छन् । श्रोताहरू गजलको नशामा झुमेका छन् । गण्यमान्य निकै साहित्यकार र कलाकार पनि अबेरसम्म बसे । गएको १३ गते राती गैह्रीधाराको करुणा इन्टेरयिरको शोरुममा भएको दृश्य हो यो । तन्नेरी डटकम र उपलब्धि प्रकाशनले आयोजना गरेको गजल सन्ध्यामा विभोर बराल र सप्रेम अर्चनाको उड्दै गए सपनाहरू र सपना कहाँ छुन सक्छु र ? संग्रहको डीभीडी सार्वजनिक गरएिको थियो । रमेश पोखरेलले नेपाली तथा हिन्दी गजलहरू गाएर सुनाउँदा श्रोताहरू मन्त्रमुग्ध भए । कार्यक्रमको अन्तिम समयतिर सञ्जय तुमु्रकले पनि गजल सुनाए । जीवन राईले तबला र सञ्जु शाहीले गितारमा सहयोग गरेका थिए ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 1:07 AM
कविता, कथा र उपन्यास नै मेरो अध्ययन र रुचिका विषय हुन् । मेरो हरेक बिहान लेखपढमै बित्ने गर्छ । लेखनमा चाहिँ कविता मेरो पि्रय विधा हो । भर्खरै मैले अमेरकिन लेखक जोन स्टेइनबेकको द ग्रेपस अफ र्‍याथ नामक उपन्यास पढिसिध्याएँ । सन् '३० को दशकमा अमेरकिाले भोग्नुपरेको कठिन समयको चित्रण यस पुस्तकको विषय हो । ओक्लाहोमाको डस्ट वोल र अर्कन्सास् भन्ने ठाउँबाट सुन्दर जीवनको खोजीमा क्यालिफोर्निया सहर पुगेका गरबिहरूको कथा यसमा समेटिएको छ । खासमा डस्ट वोल र अर्कन्सास् भोकमरीले ग्रस्त क्षेत्र हुन् । यस्ता ठाउँबाट क्यालिफोर्निया पुगेर गरिब परिवार र थुप्रै समस्यासँग जुध्न पुग्छन् । बाँच्नका लागि ठूलठूला संघर्ष गर्छन् । जीवनको नयाँ सुरुवात गर्दा अनेकौँ कठिनाइहरूसँग लाप्पा खेल्दै अघि बढ्नुपर्छ । ओक्लाहोमाका गरबि किसान जनता त्यहाँका धनीहरूबाट अमानवीय व्यवहार सहन विवश भए । उनीहरूले बाध्यतावश एकदमै तल्लो स्तरको र त्यसमा पनि न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्छ । पुस्तकमा प्रयोग गरएिका विम्बहरूले पनि ठूला अर्थ बोकेका छन् । ट्रयाक्टर र ड्राइभरलाई राक्षस र निर्जीव वस्तुहरूसँग दाँजिएको छ ।उपन्यास एकदम यथार्थवादी छ । प्रमुख पात्र जोर्डस्सँगै अन्य हजारौँ पात्रले भोगेका पीडादायी क्षणहरूले मन छुन्छ । क्यालिफोर्नियाका पुँजीपतिको छायाँमुनि अन्त्यहीन गरबिीको घेरामा रहेका बासिन्दा र व्यक्तिबीचको भिन्नता, सरकार र जनताबीच भत्किएको विश्वास यसको प्रमुख कथावस्तु हो । त्यसताकाको अमेरकिाको पीडा चित्रण गर्नुका साथै त्यहाँको परविर्तन पनि यसले झल्काएको छ । सन् '४० मा यो उपन्यासले पुलिट्जर पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो । यसै वर्ष पुस्तकमाथि फिल्म पनि बनाइयो । पुरानो अमेरकिा र परविर्तित अमेरकिाबारे जान्न खोज्नेहरूका लागि यो पुस्तक उपयोगी छ ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 1:04 AM
पैँतीस सन्तानकी आमा !
अविवाहित हुदै ३५ केटाकेटीकी आमा ? हो, काठमाडौँ, डिल्लीबजारकी पुष्पा बस्नेत, २५,परिस्थीतिले अनाथझैँ बनाएका बालबालिकाको आमा बनेकी छन् । सिंगो परिवार व्यापारमा लागे पनि उनी भने जेल परेका मानिसका बालबच्चा लालनपाल नमा समर्पित छिन् । यसका लागि पुष्पाले महाराजगन्जमा अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर खोलेकी छन्, जहाँ १६ महिनादेखि १२ वर्षसम्मका ३५ बालबालिकाले आश्रय पाएका छन् । पुष्पालाई एउटा करुण संयोगले सेवाको यस क्षेत्रमा तानेको थियो, पाँच वर्षअघि । भयो के भने सेन्ट जेभियर्स कलेजको छात्राका रूपमा फिल्ड वर्कमा जाँदा उनी कालीमाटी महिला प्रहरी सेल पुगेकी थिइन्, जहाँ १३ महिनाकी एक बच्चीले टुलुटुलु हेर्दै कुर्ता तानिन् । ती दुई निर्दोष आँखाले पुष्पालाई यति स्तब्ध बनायो कि उनले त्यही क्षणमा यस्ता बालबालिकाको रक्षामा काम गर्ने निधो गरनि् । परिणाम, पाँच वर्षको अवधिमा उनी यतिका बालबच्चाका प्यारी पुष्पा मामु बनेकी छन् । भन्छिन्, "यिनीहरूले छिनछिनमा मामु भनेर बोलाउँदा जुन खुसीको अनुभूति हुन्छ, त्यसको न बयान सम्भव छ, न त तुलना नै ।"
पत्रिकाकाकै स्वरुपमा हेर्ने भए यहा" छ
किताब बेच्ने नौलो जुक्ति
आफूले लेखेका पुस्तकहरू कसरी बेच्ने ? धेरैजसो लेखक पुस्तक पसलको भर पर्छन् । कतै प्रकाशन गृहले नै बिक्रीको जिम्मा लिएका हुन्छन् । मकवानपुर, फापरबारी-५ का भीमप्रसाद दुलाल, ६५, ले भने पुस्तक बेच्ने अर्कै तरिका अपनाएका छन् । विसं ०३८ देखि हालसम्म ६९ किताब लेखिसकेका दुलाल किताब बेच्न मुलुकका ७५ जिल्ला पुगिसकेका छन् । उनी जहाँजहाँ जान्छन्, मानिसहरू भेला गरेर सिंगै किताब पढेर सुनाउँछन् र मन पराउनेलाई त्यहीबेला किनाउँछन् । दुलालले राजनीतिक व्यंग्य, अपराध, तस्करी र दरबार हत्याकाण्डदेखि श्रीखण्डलाई खुर्पाको बिँड बनाउने प्रवृत्तिसम्मका विषयमा कलम चलाएका छन् । यस क्रममा ३१ पटक पक्राउ परेका छन्, तीन वर्ष जेलमा बिताएका छन् । सधँै एक्लै हिँड्ने बानी बनाएका भीमप्रसादले अहिले भने ललितपुरका गणेशराज भेटवाल, ३८, लाई अभिन्न साथी बनाएका छन् । यी दुईले एक स्वरमा कविता पढ्दा श्रोताबाट तालीको पर्रा छुट्छ । यो काइदा अपनाउँदा एकै दिनमा ६० वटासम्म किताब बिकेका छन्, भीमप्रसादका । भन्छन्, "अब पुस्तक पसल खोल्ने सुरमा छु ।"
पत्रिकाकै स्वरुपमा हेर्ने भए यहा" छ
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 12:54 AM
Labels: फरक काम
सहरमा अपहरण-हत्याजस्ता जघन्य अपराध बढ्दो छन् । स्कुल गएका केटाकेटी कतिखेर अपराधीको पञ्जामा पर्छन्, थाहा हँुदैन । कतिपय घटनामा अपहरणमा परेकाहरूलाई परिवारले फिरौती दिएर पनि जीवित फर्काउन सकेका छैनन् । यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन भनेर काठमाडौँ-३५, कोटेश्वरका विमला, ३९, र केदार लुइँटेल , ४६, दम्पतीले आफ्ना छोरा विवेकको सम्झनामा विवेक शर्मा लुइँटेल प्रतिष्ठान खोलेका छन् । अपहरणकारीहरूले तीन वर्षअघि विवेकको अपहरणपछि हत्या गरेका थिए । केदार लुइँटेल भन्छन्, "अपराधीको हातबाट छोरा गुमाउँदा हामीले भोगेको पीडा अरूले भोग्न नपरोस् ।"त्यो पीडा भोगेका लुइँटेल दम्पती यस अभियानमार्फत अरू आमाबाबुलाई यस्तो अपराधविरुद्घ होसियार र प्रेरित गराउन चाहन्छन् । उनीहरूले बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराधको तथ्यांक संकलन मात्र गरेका छैनन्, कारबाहीका निम्ति दबाब पनि सिर्जना गरिरहेका छन् । बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक सबैलाई सुरक्षासम्बन्धी शिविरमा सहभागी गराउने, अपहरणका घटनाबारे भिडियो लाइब्रेरी बनाउने उनीहरूको योजना छ । घरैमा खोलिएको भए पनि पवित्र लक्ष्य र उद्देश्यका कारण यस प्रतिष्ठानले ठूलै कार्यालयको स्वरूप लिँदैछ, जसमा आफन्तजन र शुभचिन्तकहरूले प्रशंसनीय सहयोग गरेका छन् । यस प्रतिष्ठानलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट पनि आएको छ ।
पत्रिकाकै स्वरुप मा हेर्ने भए यहा छ-
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 1:06 AM
Labels: Miss Mangol-2009
राजधानीमा शनिवार सम्पन्न प्रथम मिस मंगोलको उपाधि सृष्टि राजकणिर्कारले जितेकी छन् । तस्विरः रमेश सुबेदी/अनलाइनखबर
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 1:01 AM
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 1:45 AM
आठसय छोरीकि आमा नरेन्द्र रौले नेपाल साप्तहिकमा ...
फेरिदैछ रोल्पाको मुहारनरेन्द्र रौले द्वन्द्वकालमा...
पिटरबाट प्रकाश नेपाल धेरै विदेशी पर्यटक आउने मुुलु...
रिक्सा छाडी टाँगातिर "तपाईं अर्कोमा आउनूस्, यो अब ...
विमलाको अभियान महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गर्ने, साम...
दसै आएन दाङमा नरेन्द्र रौले / दाङ "बुबा, म भोली सा...
राजधानीमा शनिवार सम्पन्न...